बिहानै पानी पिउँदा शरीरमा के हुन्छ ? – Yess Khabar
बिहानै पानी पिउँदा शरीरमा के हुन्छ ?
२७ माघ २०७५, आईतवार २३:५४ February 10, 2019 by Yess Khabar
हाम्रो शरीरमा कम्तिका पनि दिनमा ४ देखी ६ लिटर पानी हाम्रो लागि अति आवश्यक छ । तर के तपाइलाई यो थाहा छ कि दैनिक बिहान खालि पेटमा पानी पिउनाले जो हाम्रो मुखमा एक किसिमको राल हुन्छ त्यो हाम्रो पेटमा पुगेर कयौं रोगहरुबाट बचाउँछ ।
यदि पानीलाई बिहानै खालि पेटमा पिउने गरियो भने यसको फाइदा सुनेर तपाइ पनि अचम्ममा पर्न सक्नु हुनेछ । आउनुहोस जानौं पानीलाई कुन समयमा कति मात्रामा पिउनेरु किनकी पानी पिउने सही तरीकाले मात्र तपाईलाई स्वस्थ राख्न सक्दछ ।
बिहान खालि पेटमा पानी पिउनुको फाइदाः
बिहानै उठ्ने बितिकै खालि पेटमा पानी पिउनाले शरीर भित्रका अंगहरु ज्यादा सक्रिय हुने गर्दछन् जसले पाचन प्रक्रिया सहज हुन्छ भने अनुहारमा पनि चमक बढ्दछ । साथै खालि पेटमा पानी पिउँदा शरीरभित्रका बिकारहरुको पनि सफा हुने काम हुन्छ ।पानीले रगतमा भएका विषाक्त पदार्थ सफा गर्छ। पानी पिउनाले नयाँ रक्त कोषिया र तन्तु बन्न मद्धत पुग्छ, जसले तौल सन्तुलित राख्न सहयोग पुर्याउँछ। जसले गर्दा हाम्रो शरीर स्वस्थ बन्न मददत गर्दछ ।
Prevमोरङमा अचम्मको सर्प फेलाप¥यो
Nextविद्यालयमा जहिले डिलो आउने शिक्षकहरुलाई र्फकाइदिए विद्यार्थीले गेटबाटै